29 | July | 2007 | Layma's World
Posted on July 29, 2007 by layma
စနေနေ့ က “လေးမ” မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာများအသင်းရဲ့ Seminar ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်…။ ပထမပိုင်းမှာ ဆရာဦးထွန်းသန်းက “ကျွန်တော်နားလည်သော ဗိသုကာပညာ ” ၊ ဒုတိယပိုင်းတွင် ဦးကျော်ထွန်းမှ “Sustainable architecture ” ဟူသော စာတမ်းများကိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသော ဗိသုကာများမှ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်….။ တက်ရောက်လာသော လူငယ်ဗိသုကာများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ဗိသုကာ ဘာသာစကားများကို အားပါးတရ နားထောင်ခဲ့ကြရပါသည်…..။ ဗိသုကာတို့ဖန်တီးပေးရသောအလှ (အမြင်ရသ) ပိုင်းဆိုင်ရာ အယူအဆများကိုလဲ အသေအချာ နားလည်ခဲ့ရပါတယ်….။
J.Ruskin ၏ Architecture is the rightly placing of sculptures and paintings. ဟူသောအယူအဆ ၊ A. Loos ၏ Ornamentation is Crime ဟူသောအယူအဆ ၊ Do not construct the decoration . Decorate the construction . ဟူသော အတွေးအခေါ်များနှင့် အတူ ၊ စွမ်းအင် အလဟသမဖြစ်စေသော ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကို မထိခိုက်စေသော ဒီဇိုင်းများဖြစ်ရန် ဗိသုကာများတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း အသိတရားများနှင့် …..Regional character, National character စသောလက်ရာဟန်များ အကြောင်း တွေးတောစရာ တပွေ့ တပိုက်နှင့် …..၁၈ ရာစုနှစ်သည် ကမ္ဘာမှာ ဗိသုကာပညာ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသော အချိန်ဟူသော ဆရာ၏ စကားတခွန်းကို အထပ်ထပ် ကြားယောင်ရင်း ကမောက်ကမ တွေးနေကျ အတွေးတွေနဲ့ ……၊ မြန်မာမှာ လက်ရှိ သွားနေတဲ့ Architecture trend ဟာ Client-architecture ပါလို့ပြောသွားတဲ့ သုံးသပ်ချက်တခုကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စဉ်းစားရင်း…..လေးမ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်….။
စနေမနက်က အိမ်တွင် မနက် ၅နာရီက ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်….ထို့ နောက် ဘုရားတက်…ပြီးနောက် Seminar တက်….ပြန်ရောက်တော့ Post တပုဒ်ဖတ်….Seminar ကပါလာသောအတွေးများ….Post မှပေးသော အတွေးများဖြင့် “လေးမ” ပလန်လက်သွားသောကြောင့် cbox မှာ နေမကောင်းဟု ရေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်….။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ Skin care နဲ့ color care ဆိုင်ရာ product အသစ်များ မိတ်ဆက်တဲ့ ပွဲတစ်ခုကို “လေးမ” စပ်စပ်စုစုရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်…။ စိတ်ဝင်စားစရာ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တင်ဆက်သွားပါတယ်….Skin care ပိုင်းကိုပြောတဲ့ အခါ…. “မွဲခြောက်ခြောက်မျက်နှာ…၀က်ခြံတင်းတိတ်ရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့အသားအရေကြည်လင်တဲ့မျက်နှာ….ဘယ်လိုမျက်နှာကိုမြင်ချင်လဲ….” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ 
အတူ “ကိုယ့်ချစ်သူကို အခုဘဲဝယ်ပေးလိုက်ပါ ” လို့တိုက်တွန်းရင်း မိတ်ဆက်သွားပါတယ်…။ ကောင်ကလေးတွေတော့ မျက်ခုံးလှုပ်စရာပါဘဲ….။ ကောင်မလေးတွေလဲ မချောင်ရှာပါဘူး….ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ အသားအရေချင်းလုံးဝမတူတဲ့ အတွက် ယောက်ျားလေးတွေက Facial Foam (for men) ကို သုံးရမယ့်အကြောင်း သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း တင်ဆက်သွားပြန်ပါတယ်…..။ Color care ပိုင်းကတော့ အရောင်တွေခြယ်ပြတာပါ….။ မော်ဒယ်လေးတယောက်ကို ခြယ်ပြတာပါ….။ မခြယ်ခင်နဲ့ခြယ်ပြီး တော်တော် ရုပ်ကွာသွားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်…..။ လေးမ ကတော့ နုနုငယ်ငယ် မော်ဒယ်လေးကို ကြည့်ပြီး “ ငါတော်တော် အိုသွားပြီ ” လို့ တရားရခဲ့ပါတယ်…..။ Skin ကိုတော့ သေသေချာချာ ထိန်းသိမ်းရတော့မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့Facial Foam (For men) တဗူး ၀ယ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်….။ ။
Filed under: Architecture, News |	3 Comments »